दिनेश राज ज्ञवाली – मझेरी डट कम
दिनेश राज ज्ञवाली
विधवाले रहर सजाएझैं
by dineshraj gyawali
विधवाले रहर सजाएझैं आउँछ ।
याद आउँछ,याद आएझैं आउँछ ।
हातमा बोकेर दियो, बाती, तेल ।
यो साँझ सूर्यसँग लजाएझैं आउँछ ।
कुरा बेग्लै थियो रातको ।
आहा साहारा त्यो हातको ।
जिन्दगि जिन्दगि भो बल्ल ।
तिमि भेटिए पश्चातको ।
न हत्तार न ओत होस ।
तब पो मजा बर्षातको ।
बिना पूजा बिना झारफुक ।
कट्यो दशा साँढे सातको ।
धेरै कविका मनसँगै हजुर कवितामा आउनुहुँदा ।
भाव सँगै बगी मनमनै मुस्काउँछु हुन्न हजुर ?
बीच बाटो पुगी थाक्नेहरू धेरै
किन होला दैव भाक्नेहरू धेरै
गजल (भन्यौ, सुनें, बुझेँ)
भन्यौ, सुनें, बुझेँ तर, गर्न गाह्रो हुन्छ हजुर
जिन्दगीलाई लाको माया, मर्न गाह्रो हुन्छ हजुर
घर छोडी, कम्ता हण्डर खाइएन आमा
छैन काम, खाने सामल पाइएन आमा
पिडा मनमा बेरियो, अनि गजल केरियो ।
आफ्नो रहर शेरियो , अनि गजल केरियो ।
दोबाटोमा भेट हुने , अन्जान मायालुको
हिड्ने बाटो फेरियो , अनि गजल केरियो ।
कति पर्खिनु, भैगो बिर्सिदिऊँ क्यारे ।
आफ्नो घाउ, आफैले नै सिऊँ क्यारे ।
यो रात कटे ,भोलि त हिजो जस्तै हो ।
मौका सम्झी ,एक गिलास पिऊँ क्यारे ।
हाम्रो यो दूरी चुलिदैछ आजभोलि ।
लाग्छ मलाई भुलिदैछ आजभोलि ।
कहिले यस्को हातमा कहिले उस्कोमा ।
चोखो जल बिटुलिदैछ आजभोलि ।
सँगीसँग अर्कैका कुरा हुन्छन रे ।
बिचमा को को हुलिदैछ आजभोलि ।
मनमा के बोझ बढ्यो र त्यस्तो कुन्नि ।
खुब मन्दिर डुलिदैछ आजभोलि ।
गजल (अरुको पानी आफ्नोलाई खुन)
अरु को छ र ! भन्दिए हुन्थ्यो नि ।
तिम्रै हो भर भन्दिए हुन्थ्यो नि ।
काट्नेले जतिसुकै कुरा काटुन् ।
मान्दिन डर भन्दिए हुन्थ्यो नि ।
छोराको भोक मार्न ,पानी पकाउँदैछन आमाहरु ।
भकारिमा मुसा राज छ ,छैनन अन्नका दानाहरु ।
घर छोडे , गाउँ छोडे ,शहर छोडे, देश छोडे ।
कृष्णलाई के थाहा आजभोलि कहाँ छन सुदामाहरु ।
को हो? मैले चिनेको मान्छे त होइन जस्तो छ । कि कतै परिचय भएर मैले बिर्सेको पो हो कि ? होइन होइन नयाँ अनुहार नै हो । म उसलाई नियाल्छु तलदेखि माथिसम्म सार्है भद्दा देखिएको थियो उसको लुगा , प्रचन्ड गर्मीमा पनि बाक्लो कालो ज्याकेट। त्यो पनि महिनौ नधोएको जस्तो तरकारी पोखाएको जस्तो पहेँला पहेँला दागहरु। कपाल जिङरिङ्ग लट्टा परेका, मुखमा पनि कालो लत्पतिएको । तर यी सबैभन्दा आँखा लाग्ने कुरा उसको लुगा-जुत्ताहरुको मुल्य, पक्कै पनि महँगो हुनुपर्छ ।
म सधैं जस्तै ९ बजे अफिस पुग्ने हतारमा बस कुरिरहेको थिएँ । अकस्मात पछाडिबाट कसैले मेरो काँधमा हात राख्यो ।
मलाई कता कता अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो @म सम्झन धेरै जोड गर्छु तर सक्दिन। मैले यहाँलाई चिन्न सकिन कसरी भन्नु? कतै चिनापर्ची भएर मैले बिर्सिएको हो कि? होइन आज-भोलि १० थरीका मान्छेहरु बाटोमा भेटिन्छन बिभिन्न थरीका समुह र बिभिन्न उद्देष्य बोकेका मान्छेहरु । शायद कोही होला ।
उसले एकटक लगाएर मेरो अनुहार हेर्यो। उसको अनुहारमा केही केही थिएन, शान्त थियो। एकदम शान्त न ग्लानि, न रिस न माया ।
उसले मेरो सर्टको खल्तीमा हात हाल्यो, मैले अनुमान गरें यो पक्कै पनि पाकेटमार हुनुपर्छ, तर पाकेटमारले यसरी सबैले देख्ने गरी खल्तीमा हात हाल्न सक्छ त? म केही बोल्न सकिन। उसले मेरो खल्तीबाट चुरोट निकाल्यो। एक खिल्ली चुरोट निकालेर बट्टा खल्तीमैं राखिदियो । म उसलाई हेरिरहेको छु, हेरिरहेको छु ।
तपाईँले त पाइला मात्रै टेके पनि जमघट विशेष हुन्छ
हामीले बोले पो जथाभावी, तपाईँले बोले उपदेश हुन्छ ।
झन झन छाती चर्किदिन्छ बढिदिन्छ घाउहरु ।
मलाई रुवाउन छोपेकी छेउ रे अनेक दाउहरु ।
नखन खाल्डो भो किन यती दुख गर्छौ ।
उसैपनी मलाई डुबाउने धेरै छन तलाउहरु ।
कोही नहुनेको त, न नाम न थर हुन्छ नानू
हीरा बाटो मा भेटियो भने, पत्थर हुन्छ नानू
माया आखा बाट मन, मन बाट मुख मा आए
दुनिया लाई चियोचार्चा को, ख़बर हुन्छ नानू
दैब फकाउन अनेक उपाय बनाउछन पुजारिहरु ।
जता जता मन्दिर उतै शंख बजाउछन पुजारिहरु ।
ना घर बाट निस्किउन न भांचुन सिन्को कतै ।
बसी बसी छातिभरी तक्मा सजाउछन पुजारिहरु ।
त्यस पछी कहाँ कसैलाई किन गन्छन मान्छेहरु ।
हात जोड्ने भेटेपछी देउता बन्छन मान्छेहरु ।
उकालो लागें शत्रु बढे ओरालो लागें आफ्ना घटे ।
हर साँझ आफ्नाकै नाममा दोबाटो मन्छन्छन मान्छेहरु ।